Ixesha elide kwiShelufu
Ukukhanya Duty Shelf
Irakhi yoyilo olukhethekileyo
I-Steel Pallet kunye ne-Logistic Equipment
IRakhi yePallet yeTeardrop ethengisayo
I-Teardrop pallet rack luhlobo lwe-racking enzima esetyenziswa kakhulu kwimarike yaseMntla Melika, ngakumbi e-United States naseKhanada. Umngxuma weenyembezi isakhelo esime nkqo sihlala sinxibelelana nemiqadi yemilo ka-P, kwaye sixhotyiswe ngegalvanized okanye ngocingo olugqunywe ngomgubo kwimiqadi ukukhusela ...
Iirack ezigotywayo zokupakisha ezisetyenziswa kakhulu ukugcina amatayara
Njengomzi-mveliso wokurhaxa, asinako kuphela ukuvelisa i-galvanized kunye ne-powder coated stacking rack (isiseko esinezithuba ezine), kodwa sinokubonelela nge-rack egotywayo elungele ukusetyenziswa, ukupakisha kunye nokuthutha. Ngo-Agasti, umthengi ovela eCanada wayalela irack egotywayo ukuba ibeke ...
Ukuhanjiswa kweRakhi eGalvanized
Ngomhla we-17 Septemba, i-factory yethu yathumela i-3 * 40HC isitya se-stacking rack, kwaye yonke into yahamba kakuhle, yathatha iiyure ze-2-3 ukugqiba ukulayisha. Kule veki izayo siza kuqhubeka nokuhambisa izikhongozeli ezi-3*40HC zeerakhi zokupakisha. Ubungakanani beRack: 1200 * 1000mm, umthamo wokulayisha umalunga netoni e-1, enokubeka i-4 la ...
IiPallets zentsimbi ezahlukeneyo zisetyenziswa kwiWarehouse
I-Pallet sisixhobo esibalulekileyo sokugcina indawo yokugcina impahla. Phakathi kwazo, iingenelo zeepaliti zetsimbi ziyabonakala. Ngenxa yokuba izinto eziphathekayo ziyintsimbi, ngoko ke amandla okuhlala angaphezulu komthamo womthwalo weepaliti zokhuni kunye neeplastiki zeplastiki. Umgubo oqatywe umgubo kunye nonyango lomphezulu owenziwe ngamazinga mawenze womelele ngakumbi ...
Umyalelo omkhulu wediphu eshushu yokupakisha irekhi
Kwiveki ephelileyo, umzi-mveliso wethu wenze ubudlelwane bexesha elide kunye nenkampani yangaphandle kwiprojekthi yokupakisha. Kwaye simisele isebe elitsha kule projekthi. Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukuthenga imathiriyeli ekrwada. Ngalo Mvulo, isebe elinxulumeneyo lidibene nomthengisi wemathiriyeli kwaye latyikitya...
ULiyuan Thenga umatshini wokuwelda weRobhothi
U-Liyuan uyaqhubeka nokuphuhlisa umgangatho ophezulu wokupakisha indawo yokugcina impahla kunye neepalethi zentsimbi, ukusukela kulo nyaka uphelileyo, umzi-mveliso wethu uthenge iiseti ezininzi ze-automatic welding machine kunye nomatshini wokuwelda iirobhothi. Ngosuku olunye lweeyure ezisibhozo zokusebenza, umatshini omnye useti unokuwelda malunga ne-600pcs yebhokisi yebhokisi, okanye i-800pcs yemilo ye-P ...
I-Ofisi Yongeza: Igumbi le-103, iSakhiwo 3, i-No100-3, iLaiyinda Road, i-Dongshan Street, iSithili saseJiangning, isiXeko saseNanjing, kwiPhondo laseJiangsu, eChina.
Factory Yongeza:Jinshan Industrial Park,Shunan Town,Yian District,Tongling City,iPhondo laseAnhui,China